Fahadisoana ny zava-drehetra - Vakio ny Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics an-tserasera
Fahadisoana daholo ny zava-drehetra Average 4 / 5 avy amin'ny 22
N / A, manana fomba fijery 63K
Vakiana ianao Fahadisoana ny zava-drehetra, mahafinaritra manhwa.
Roa Valrose dia teraka tamin'ny nofo ho olon-dratsy tao amin'ilay boky. Mba hialana amin'ny fiafaran'ny fahamaizana azy dia nanatona ilay maherifo izy, Nocton Edgar. Maharary isaky ny manakaiky azy izy. Na eo aza izany, ho an'ny fahavelomany dia manao izay tiany hatao izy. "Miverena indray, Valrose." Nikaroka azy tsy ampoizina isan'andro i Nocton mistery. Avy eo indray andro, nilaza ny zavatra tsy fantany ny namany nandritra ny 10 taona. “Tena manonofy aho. Ny Duke of Edgar dia olon-dratsy! ” Tsy izy no mahery fo, fa ilay olon-dratsy? Raha vantany vao hitany fa diso ny fandikany ilay andraikitra, dia nanapa-kevitra ny hiala i Nocton izy. “Andao tsy hihaona intsony.” Fa hafahafa ny fihetsiky ny olon-dratsy. “Aza mandeha. Niavaka ho ahy foana ianao. ” Niahiahy ny fiovan'ny toetrany tampoka izy. Vitany ve ny manala an'i Nocton soa aman-tsara?
Chapter 65 Enga anie 13, 2022
Chapter 64 Enga anie 13, 2022
Chapter 63 Enga anie 13, 2022
Chapter 62 Aprily 15, 2022
Chapter 61 Aprily 7, 2022
Chapter 60 Aprily 1, 2022
Chapter 54 Janoary 20, 2022
Chapter 53 Janoary 20, 2022
Chapter 50 Septambra 9, 2021
toko 49 Aogositra 30, 2021
Chapter 48 Aogositra 30, 2021
Chapter 47 Aogositra 24, 2021
Chapter 46 Aogositra 24, 2021
Chapter 45 Aogositra 24, 2021
Chapter 44 Aogositra 24, 2021
toko 43 Aogositra 24, 2021
Chapter 41.5 Jolay 12, 2021
toko 41 - 42 - hita ao amin'ny teenmanhua.com Janoary 12, 2022
Chapter 40.5 Jolay 10, 2021
toko 40 March 25, 2022
Chapter 40 Jolay 10, 2021
Chapter 39.5 Jolay 12, 2021
toko 38-39 Janoary 12, 2022
Chapter 38 Jolay 7, 2021
Chapter 37 Jolay 2, 2021
Chapter 36 Enga anie 9, 2021
Chapter 33 Febroary 28, 2021
Chapter 32 Febroary 26, 2021
Chapter 31 Febroary 17, 2021
Chapter 27 Janoary 18, 2021
Chapter 23 Desambra 16, 2020
Chapter 22 Desambra 16, 2020
Chapter 5 Desambra 2, 2020
Chapter 4 Desambra 2, 2020
Chapter 3 Desambra 2, 2020
Chapter 2 Novambra 22, 2020
Nifoha tamin'ny 20 taona aho!
Kasiho mikasika anao